Cookpad - Create your own Recipes 2.115.0.0-android Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.115.0.0-android လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Cookpad - Create your own Recipes
Cookpad - Create your own Recipes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျသစ်ကိုစိတ်ကူးများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ, အိမ်မှာချက်ပြုတ်ကိုချစ်နှင့်အခြားသူများနှင့်သင်၏မြူးမျှဝေလျှင် Cookpad သင်တို့အဘို့ရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာဟင်းချက်တစ်ခါတစ်ရံအထီးကျန်ခံစားရနိုင်ပြီး, ဒါကြောင့်နေ့စဉ်တွန်းအားကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နီးပါး3သန်းချက်ပြုတ်နည်းများ, တက်ကြွချက်ပြုတ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ, သငျသညျသစ်ကိုစိတ်ကူးများများအတွက်ရုန်းကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤအ Cookpad app ကို features တွေခံစားကြည့်ပါ:
- သူချင်း Cookpad အသုံးပြုသူများသည်နှင့်သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ရှယ်ယာ Add
- သင်အတိုင်းလိုက်နာတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးဆီကနေနောက်ဆုံးပေါ်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုအမြဲလတ်ဆတ်တဲ့အစာကျွေးခြင်း Explore
- သင်ကဟင်းချက်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူချက်ပြုတ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံထားပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက်တွင် - Real-time ၌သင်တို့၏စာရွက်ချက်ပြုတ်သူမြင်ရပ်ရွာကနေချက်ပြုတ်စကားပြောဆိုမှုအတိုင်းလိုက်နာသူတို့လုပ်မဆိုအပြောင်းအလဲများကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး, Cookpad စာရွက်ဖန်တီးသူအသစ်သောထောင်ပေါင်းများစွာ၏ add
သငျသညျသစ်ကိုစိတ်ကူးများရှာဖွေတွေ့ရှိသကဲ့သို့သင်တို့ယခုလွယ်ကူစွာနေ့စဉ် cookplan သို့သူတို့ကိုငါကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်နောက်တစ်နေ့ချက်ပြုတ်ချင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်င့်လာသောအခါဒီတော့စီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်နေပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။
သငျသညျအရာတစ်ခုခုချက်ပြုတ်တစ်ချိန်ကနှင့်အညီ, သငျသညျယခု "ချက်ပြုတ်" အဖြစ်က mark နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထို့နောက်သင့်ချက်ပြုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများစာရင်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းဆိုလိုသည်။ အလုပ်များဘဝတွေကိုနှင့်အတူ, သင်အတိတ်တွင်ပျော်မွေ့သောသူတို့ကိုအစားအသောက်ကိုမမေ့လျော့ဖို့အားလုံးကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ကောင်းပြီ, သည် "ချက်ပြုတ်" အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူသင်ပြဿနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကမ္ဘာ့အလှုပ်ရှားဆုံးချက်ပြုတ်အသိုင်းအဝိုင်း ကို Join
Cookpad ပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပျေါလှငျ, ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်သင်ချက်ပြုတ်ဖို့ကိုချစ်အစားအစာ၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုမျှဝေပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုစာရွက်ဖန်ဆင်းခြင်း tool ကိုနှင့်အတူသငျသညျမိနစ်၌သင်တို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများ, စိတ်ကူးများနှင့်ဓာတ်ပုံများထည့်သွင်းနိုင်သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကချက်ပြုတ်ရေးနှင့်သင့်စာရွက်အတော်ပင်သောအခါကိုအကောင်းဆုံးခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ Cookpad အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟင်းချက် Log in ဝင်ရန်ဒီခေါ်သငျသညျ, ထိုစာရွက်ခံစားထားပါတယ်တခြားသူကိုတွေ့မြင်၎င်းတို့၏အကြံပေးချက်များမြင်သူတို့အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်များနှင့်ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်င့်ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်သူကပဲ!
ဤသည် Cookpad အထူးစေသည်ဘာလဲ - သင်အရမ်းဖှယျမှတဆင့်ပိုပြီးချက်ပြုတ်ခံစားနိုငျနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရ။
Cookpad ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအိမ်လုပ်စာရွက်-sharing app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျော် 70 နိုင်ငံများရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ 20 ကျော်ဘာသာစကားများလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
: Cookpad ပြီးသားလူတွေသန်းပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့
အခြားအတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးနှင့်အတူဆက်သွယ်မှု Build ။
ကျွန်တော်တို့ကို join လာကြ💜
Cookpad - Create your own Recipes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cookpad - Create your own Recipes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cookpad - Create your own Recipes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cookpad - Create your own Recipes အား အခ်က္ျပပါ
sauron3256 စတိုး 97 38.43k
Cookpad - Create your own Recipes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cookpad - Create your own Recipes အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.115.0.0-android
ထုတ်လုပ်သူ Allthecooks, LLC.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://cookpad.com/us/privacy
လက်မှတ် SHA1: DB:77:92:FF:40:C0:87:50:43:48:B1:BE:7D:30:18:F1:6C:F1:CB:0B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rafael Sanches
အဖွဲ့အစည်း (O): Mufumbo Labs
Cookpad - Create your own Recipes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ